Jaban Sareysa Warshadaha 20-26ft HVLS Saqafka Fan Perfect hawlaha soosaarayaasha iyo alaableyda. Bejarm
Hawlaha Sare ee 20-26ft HVLS Saqafka Fan Fan hawlaha
Mug aad u weyn oo hawo ah, Amaan iyo hubin
Si fudud ula qabsada jawiga daran
Extremely mugga hawo weyn , Safe iyo xaqiijin
Superstar oo lagu daray taxane wuxuu adeegsanayaa mabda'a shaqada ee Magnetically Levitated Train si loogu beddelo mowjadaha safarka toosan ee aagga wareegga magnetka. Dhexroorka ugu badan wuxuu gaari karaa 8 mitir, mugga hawada ugu badanna wuxuu gaari karaa 18660 m3 / min, taasoo ka badan mugga hawada ee alaabada caadiga ah in ka badan 35%. Waxay kobcin kartaa wareegga socodka hawada ee booska iyadoo la adeegsanayo karti sare, lagu gaarayo ujeeddada qaboojinta shaqaalaha, iyo hagaajinta heerka raaxada deegaanka.
18660m³ / daqiiqo
Faa'iidada HVLS - Waxay kaa caawineysaa inaad keydiso tamarta
Super adeeg dheer
Bejarm wuxuu leeyahay 17 sano oo ah taariikhda horumarinta tikniyoolajiyadda, maaraynta tayada adag iyo qaybo heer sare ah. Taageerayaasha warshadaha magnet ee joogtada ah waa kuwo la isku halleyn karo oo waara.
Birta birlabtu ma demagnetized
Kartoo sare bir birta magnetic aan demagnetization.
Tallaabooyin dhowr ah oo ilaalin ah si loo ilaaliyo, walwal kama qabin amniga
Dhammaan noocyada xaaladaha ba'an waxaa loogu ekaysiiyaa tijaabooyinka, iyo noocyada kala duwan ee shilalka isticmaalka dhabta ah ayaa lagu tixgeliyey badbaadada naqshadeynta mashiinka oo dhan. Waxay ka tirsan tahay naqshadda badbaadada aadka u saraysa, sidaa darteed dadka isticmaala waxay maskaxdooda dejin karaan nasasho.
1.Qof kasta oo isku xira waxaa lagu qalabeeyaa aalado laba-difaac ah;
2.Qiyaasaha ilaalinta korantada iyo qaabdhismeedka waxaa loogu talagalay in looga fogaado shilalka labaad.
3. Qoyaanka shaqada ee matoorku wuxuu gaari karaa 100%, gebi ahaanba aan biyuhu xirin oo aan carro-caddeyn karin.
4. Xaaladda mugga hawo ku filan, oo qumman
isku darka naqshada shaqsi ahaaneed ee caagadaha marawaxadaha Bejarm iyo matoorkeeda magnet ee joogtada ah waxay xaqiijin kartaa in aaladaha aluminium magnesium ee hareeraha hareeraha ay leeyihiin adkaansho iyo xoog ku filan, si aysan u xumaanin inta lagu jiro hawlgalka oo uu leeyahay buuq hoose oo ay weheliso qodobka amniga ee sarreeya
SuperStar-Plus Taxanaha ah - munaasabado munaasib ku ah arjiga
Aqoon-isweydaarsi / Bakhaarrada Saadka / Goobta Ciyaaraha Gudaha / Xarunta Carwada / Dukaanka 4S / Dukaan weyn iyo dukaamo waaweyn / Vestibule oo ka mid ah dhismaha xafiiska / Matxafka / Hawlo ganacsi oo waaweyn oo dibedda loo kireeyo / Beerta xayawaanka iyo arboretum / Carruurta lagu ciyaaro / Saldhigga Tareenka / Saldhigga tareenka xawaaraha sarreeya / Xarunta basaska. / Saldhigga dhulka hoostiisa mara / Dhismaha Terminalka
Hore: 3.2KW Aamusnaanta Inverter Gawaarida Gaaska ee Generator BF2250IS
Xiga: Waxqabadka sare ee Warshadaha 17-24ft HVLS Saqafka Fan Fan mug weyn oo hawo ah
Xaraynta Fan Blade
Naqshad lakab laba-gees ah oo ah 10 blad oo ku habboon w ...